I-Residencia il Glicine S - I-Airbnb
I-Residencia il Glicine S
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguLorenzo
Indawo yokuhlala kwi-60s villa 7 km ukusuka kwiziko lihlaziywe ngokupheleleyo (2018) kwisitayela se-Art Nouveau, ukufikelela ngasese kunye nokupakisha, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igugu lokwenene, uthando kunye neefestile kunye negumbi lokuhlambela langasese.
Zonke izinto ezithuthuzelayo ezifika engqondweni ziyafumaneka: i-fiber optic wifi, umabonakude, ukhuseleko, zonke izinto zegumbi lokuhlambela ezinje ngetawuli zococeko ezinobuso bomzimba, ishampu, ibhafu yebhamu, isepha yolwelo yococeko olusondeleyo, isixhobo sokomisa iinwele.
Iindawo eziqhelekileyo: ikhitshi, igumbi lokuhlala, indawo yokuhlamba impahla.
Ukuba ikhona, unokwabelana ngeendawo eziqhelekileyo nabanye abantu abanomdla (ubuninzi abathathu), leliphi ithuba elingcono lokudibana nabantu abatsha. Konke ngaphandle kokubeka esichengeni ubumfihlo bakho kunye neendawo zakho zabucala, kunye nokubakho kokutshixa.
Igumbi lokuhlala, elinesofa enkulu, izitulo ezibini, iTV enescreen esicaba.
Ikhitshi, ixhotyiswe ngokupheleleyo ngekofu kunye nomatshini, iti, ityuwa, iswekile, ioyile yomnquma enyulu, i-carafe yamanzi ahluziweyo amancinci. Iitafile ezimbini zokutya nokuba wedwa ngasese ngokupheleleyo, okanye zonke kunye.
Impahla onayo inomatshini wokuvasa, isinki kunye nerekhi yokomisa.Ibandakanywe kwixabiso lokuhlala ixesha elide.
Uya kuba nexesha elimnandi lokufika embindini wesixeko.
Indawo yokuhlala isetyenziswa kakhulu zizithuthi zikawonke-wonke, njengebhasi ye-13 (rhoqo kwimizuzu emi-6) kunye ne-96 (rhoqo kwimizuzu eli-15) ezithatha ukuya kwiziko kwimizuzu eyi-15-20. Sikwakuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo saseRastignano, esikuvumela ukuba ufikelele kwisikhululo saseBologna kwimizuzu emi-5, kunye nazo zonke ezinye izikhululo zedolophu.
4.91 · Izimvo eziyi-224
Ndihlala izinyuko ezingama-30 ukusuka kwiflethi, ngoko ke siya kuba ngabamelwane! Ndiza kuzama ukuba semandleni akho, ngaphakathi kwemida yomsebenzi wam kunye nezibophelelo zobuqu, ngaphandle kokuphazamisa. Ewe ... ndikwahlengahlengisa ngokweemfuno zabathengi..
Ukungena kunye nokuphuma kukhathalelwe ndim umntu.
Ndihlala izinyuko ezingama-30 ukusuka kwiflethi, ngoko ke siya kuba ngabamelwane! Ndiza kuzama ukuba semandleni akho, ngaphakathi kwemida yomsebenzi wam kunye nezibophelelo zobuqu,…